Duuliyayaasha diyaaradaha qaarkood oo ka warbixin cilladaha ammaanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mid ka mid ah diyaaradaha Norwegian oo nooceedu yahay Boeing 787 Dreamliner. Sawirle: Francois Mori/Scanpix
Duuliyayaasha diyaaradaha qaarkood oo ka warbixin cilladaha ammaanka
La daabacay måndag 19 augusti 2013 kl 15.40
Ururka duuliyayaasha iswiidhishka ayaa idaacadda Ekot u sheegay in duuliyayaasha ay shuruudahooda shaqadu xun yihiin aysan uga warbixin cilladaha ammaanka diyaaradaha sida ay uga warbixiyaan duuliyayaasha haysta shaqo joogto ah. Hay’adda gaadiidka oo iyadu u xilsaaran ammaanka diyaaradaha ayaan arag wax taas caddeynaya. Sidaasna waxaa sheegay Anders Pettersson oo madax ka ah waax ka tirsan Hay’adda Gadiidka Qaranka.
Wuxuu ninkaani idaacadda Ekot u sheegay in waxrbixinaha duulayayaashu soo gudbiyaan mar walba laga eego bal haddii ay cilladaha xagga ammaanku soo kordheen ama yaraadeen, laakiin aysan u muuqan wax xiriir ah oo ka dhexeeya rabitaanka duuliyayaashu ku doonayaan in waxbixinaha soo gudbiyaan iyo habka ay ku shaqeeyaan. Haddii la doonayo in arrinta wax laga qabto waa in la haystaa caddeymo muujinaya in ay sidaas wax yihiin.
Dhaleeceymahaan duuliyayaasha waxaa la la xiriirinayaa markii ay dhowaan shirkadda Norwegian bilowdey duulimaadyo dhul fogfog oo ay dooratey in ay hawlgeliso duuliyayaal ay ka soo kireystay shirkadaha shaqaalaha kireeya. Koox duuliyayaal ah oo u shaqeeya shirkadda Irland laga leeyahay ee Ryanair ayaa hoggaanka dhexe ee shirkadda ka codsaday in baaritaan lagu sameeyo haddii habka shaqadu saamayn ku leeyahay ammaanka diyaaradaha.